Dutchtown CID • DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
အဆိုပါ Dutchtown CID
နယ်သာလန်နိုင်ငံအသိုင်းအဝိုင်းတိုးတက်ရေးခရိုင်သည်ယင်း၏အတွင်းအိမ်ခြံမြေများအပေါ်အထူးအခွန်အကဲဖြတ်ချက်ကောက်ယူသည့်နိုင်ငံရေးဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည် နယ်နိမိတ်။ ထိန်းသိမ်းမှု၊ တင့်တယ်မှု၊ လုံခြုံမှု၊
ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်လူထုခေါင်းဆောင်များ၏အကူအညီဖြင့် Dutchtown CID ကိုတရားဝင်တည်ထောင်ခဲ့သည် စိန့်လူးဝစ် Ordinance 70559 ၏စီးတီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Dutchtown CID သည်အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များ၏ ၅၁% ကျော်သောအသနားခံစာကို CID ခြေရာလက်ရာအတွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။
CID ကိုလမ်းညွှန်သည် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ CID ခြေရာခံအတွင်းမှနေထိုင်သူများ၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့် အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များ ပါဝင်သည်။ အများသူငှာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများကို လတိုင်း၏ စတုတ္ထမြောက် အင်္ဂါနေ့တွင် ကျင်းပပါသည်။ သွားရောက်ကြည့်ရှု Dutchtown ပြက္ခဒိန် ဒါမှမဟုတ် DutchtownSTL Facebook စာမျက်နှာ အစည်းအဝေးအချိန်နှင့် တည်နေရာဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များအတွက်။
ထိုသွားရောက်ကြည့်ရှု စာရွက်စာတမ်းများစာမျက်နှာ ဘို့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း, သတိပေးချက်များ, အစီအစဉ်များနှင့် အစီရင်ခံစာများ.
အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ကနေ input ကိုလက်ခံရရှိသည် Dutchtown ကော်မတီများ ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံမှု, မြှင့်တင်ရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ပြregardingနာများကိုနှင့်ပတ်သက်။ ။ ကော်မတီများသည်လူတိုင်းအတွက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပြီး CID ၏အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်ရှိသောကိစ္စရပ်များတွင်လုပ်ကိုင်သည်။ ကော်မတီဝင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
လာမည့် CID ဖြစ်ရပ်များ နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်များ Dutchtownstl.org/calendar
ဖြစ်ရပ် 18:6 pm တွင် @ ဇန်နဝါရီလ 00
နောက်ထပ်အချက်အလက် Dutchtown အဖွဲ့အစည်းကော်မတီအစည်းအဝေး
ဖြစ်ရပ် 20:6 pm တွင် @ ဇန်နဝါရီလ 00
နောက်ထပ်အချက်အလက် Dutchtown ဒီဇိုင်းကော်မတီအစည်းအဝေး
ဖြစ်ရပ် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ
နောက်ထပ်အချက်အလက် Meramec မျက်လှည့်
ဖြစ်ရပ် 25:5 pm တွင် @ ဇန်နဝါရီလ 30
နောက်ထပ်အချက်အလက် Dutchtown CID ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့
Dutchtown CID သတင်း နောက်ထပ် CID updates များကိုရှာဖွေပါ dutchtownstl.org/news မှ